I-SXAE-412 ngokuzenzekelayo i-CNC 4 imibala yokuprinta kwesikrini (umshishini we-servo)-sxaequipment-Chinese,China,Manufacturer,Supplier,Factory,Price
South Africa Xhosa I-SXAE-412 ngokuzenzekelayo i-CNC 4 imibala yokuprinta kwesikrini (umshishini we-servo)
Igama lomkhiqizo: I-CNC imibala engama-4 ngokuzenzekelayo imishini yokuprinta kwesikrini
i-rotary, i-multicolor, yezinto ezijikelezayo kunye ne-oval, iwayini yeglasi ibhotile, ibhotile yeglasi yotywala, izimbiza zeglasi, izibilini zeglasi, iikomityi, iigg, njl njl.
1. Ukulayisha ngokuzenzekelayo inkqubo, i-multi axis servo robot.
2. Inkcazo yeetable table, ukuchaneka ngokuchanekileyo.
3. Inkqubo yokushicilela ngokuzenzekelayo, zonke iinkonzo ze-servo: intloko yokushicilela, isakhelo sendawo yokujikeleza, ukujikeleza, isitya kunye / phantsi, zonke eziqhutywa yi-servo motors.
4. Zonke iigodo kunye nomoya ngamnye we-servo oqhutywe, ukujikeleza.
5. Ukutshintsha ngokukhawuleza kwaye kulula, ukusuka kwisiqhamo esinye ukuya kwesinye. Lungisa iiparamitha nje kwiskrini soqhagamshelwano.
6. Inkqubo yokuphulukisa i-UV LED, ixesha elide lokuphila, ukugcina amandla.
7. Ukukhulula ngokuzenzekelayo, i-servo robot.
8. Ukhuseleko lwe-CE.
1. Intloko inokutshintshwa, intloko yokutshisa ishushu, ukushicilelwa kwesikrini kunye ne-hot stamping kunye.
Inkqubo yombono wekhamera, kwimveliso ye-cylindrical, ngaphandle kwendawo yokubhalisa, ukusinda umgca wokubumba.
Isantya sokuprinta: 1800-2100 Amacandelo / iyure (ehlengahlengiswayo kwimilo eyahlukeneyo kunye nokushicilela umfanekiso)
Indawo yokuprinta: I diameter 30-90mm, Ubude obuphezulu 80-220mm
Uxinzelelo lwomoya: 6-8 Ibhar
Umlinganiselo womatshini: L 5400 * W 5000 * H 2400mm
Amandla: I-AC 380V, i-3-Phase, i-50Hz / 60Hz, i-23Kw (i-UV yesiqhelo), i-5KW (i-UV UV)
ubuchule obuphezulu kunye nokusebenza, ukuhlala ixesha elide, ukwandisa ixesha lakho lokujikeleza,
ukunciphisa iindleko zabasebenzi, indleko efanelekileyo, umgangatho we-CE. Ukushicilela ngokucacileyo umfanekiso kunye nomzobo, usebenze olulula, umgangatho ophezulu wenze i-CNC 4 imibala ngokuzenzekelayo yokushicilela i-servo motor system system.
umenzi wenziwe ngokuzenzekelayo nge-CNC imibala emine imibala yokushicilela i-servo motor equipment.
ukutshintsha ngokukhawuleza, ukuveliswa kwemveliso,
Inkqubo eyenziwe ngokuzenzekelayo ye-CNC multicolor yeskrini yokushicilela i-Servo System Factory.
ukuprinta phantse nayiphina indawo, ukunamathela kakuhle kunye ne-opacity ink yokuprinta,